၂၀၂၂ မြန်မာပြည်နှင့် Ecommerce : A Creative Digital Agency - Digital Dots
၂၀၂၂ မြန်မာပြည်နှင့် Ecommerce
2021 မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေဟာ တဟုန်ထိုးတက်လာတာကို social media ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Stay Home ကာလဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေအရ လူအများစုဟာ online shoppingတွေ online learning system တွေကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြတာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ E commerce ဆီသို့ ဦးတည်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Ecommerce နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို Digital Dots ကနေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
E commerce (Electronic Commerce) ကို Internet Commerce လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝယ်ယူရောင်းချ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုလို့လည်း မှတ်ယူနိုင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဝယ်ယူခြင်း၊ Software, EBooks, online courses တွေ ဝယ်ယူလေ့လာခြင်း အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်း စတာတွေကိုလည်းecommerce လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
shop.com.mm, citymall.comm,Amazon.com,booking.com,agoda.com တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေတဲ့ Ecommerce websites အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ecommerce တွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်က Electronic Data Interchange (EDI) နှင့် 1970 ခုနှစ်များတွင် တယ်လီစျေးဝယ်ခြင်းကဲ့သို့သော အစောပိုင်းနည်းပညာများကို မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကစတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 1991 ခုနှစ်မှာ Berners-Lee က World Wide Web အများပြည်သူသုံး အင်တာနက်ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ၉၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းကာလမှာတော့ အင်တာနက်ကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုဟာ ကြီးကြီးမားမား တိုးတက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။Retail ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amazonဟာလည်း ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်အလွန် အစောပိုင်းကာလကုန်ပစ္စည်းများကို အွန်လိုင်းတွင် စတင်ရောင်းချသည့် ပထမဆုံးသော ecommerce site တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ထောင်နှင့်ချီရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ebay,paypal, Apple pay စတာတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
2019 ခုနှစ် စာရင်းအရ မြန်မာ့ e-commerce စျေးကွက်တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ6သန်းသာ ရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ online shopping အများစုကို လူမှုကွန်ရက်၏ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် internet traffic အားလုံး၏ 85% ဟာFacebook ပေါ်တွင်ရှိနေပါတယ်။ Facebook shopping တိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများတွေဟာ ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ပလပ်ဖောင်းကို အရှေ့ဘက်ဈေးကွက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် အလျင်စလိုလုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ e-commerce ဟာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနေပြီး lockdown ကာလမှာ အိမ်မှာ ပိတ်မိနေတာတွေ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် အွန်လိုင်းဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ ပိုများလာပါတယ်။ 2020 ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူပေါင်း ၁၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ လူ၂၀၀ မှာ ၉၁ ဦးဟာအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကို အသုံးပြုကြတယ်လို့ Myanmar Insider ရဲ့ Myanmar E-commerce Consumers Survey 2020 မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ 2021 ခုနှစ်မှာလည်း ကပ်ရောဂါနဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ecommerce ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာကြပါတယ်။
Ecommerce Website တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသော Digital Marketing Service တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို လိုအပ်နေပြီဆိုရင်တော့ Client ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Digital Dots ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ အပ်လို့ရပါတယ်။လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Facebook ပဲလိုလို Website ပဲလိုလို Digital Dots ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
09 8989 460 15, 09 8989 460 45
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Ecommerce Websiteလိုအပ်လား?
© Digital Dots 2022. All Rights Reserved.